खोइ पानी जहाज? खोइ घरघरमा ग्यास पाइप?’ - Open Khabar - नेपाली अनलाइन डिजिटल पत्रिका
खोइ पानी जहाज? खोइ घरघरमा ग्यास पाइप?’
काठमाडौं,पुस १५ ।नेकपा वरिष्ठ नेता एवं पूर्वप्रधानमन्त्री झलनाथ खनालले बहुमत केन्द्रीय सदस्यहरू आफूहरूसँगै रहेकाले नेकपा, सूर्य चिह्न, झन्डालगायत आफूहरूसँगै रहने बताए । प्रधानमन्त्री भएपछि ओलीले आफ्नै प्रतिबद्धताअनुसार काम नगरेको उनले ओलीमाथि आरोप लगाए ।
‘ओलीले पार्टीलाई भ¥याङ मात्रै बनाउनुभयो । पार्टीका नीति बिर्सनुभयो । कहिले पानी जहाजको कुरा गर्नुभयो, कहिले घरघरमा पाइपबाट ग्याँस ल्याउने कुरा गर्नुभयो । खोइ पानी जहाज रु खोइ घरघरमा ग्यास पाइप ?’ खनालले भने, ‘वास्तवमा उहाँले तीन वर्ष त गफै गरेर बिताउनुभयो ।’
नेकपालाई भ¥याङ बनाएर ओली सत्तामा पुगेको बताउँदै उनले प्रधानमन्त्री भएकै दिनबाट पार्टी बिर्सिएको आरोप लगाए । पार्टी घोषणापत्रअनुसार सरकारले काम नगरेको भन्दै आक्रोश व्यक्त गर्दै उनले गफै गरेर देश नचल्ने बताए ।
खोइ पानी जहाज? खोइ घरघरमा ग्यास पाइप?’फिचर
सप्तरीमा तीन जना सवार मोटरसाइकल दुर्घटनामा दुईको मृत्यु एक घाइते 13 views per day